Sida loo Beddelaan RA in MP3 u Google Music i
> Resource > Android > Sida loo Beddelaan RA in MP3 u Google Music
RA, gaaban Real Audio, waa qaabka lahaansho audio by RealNetworks. Waxaa inta badan loo isticmaalo geeyo audio online. Haddii aad caadi ahaan maqlaan iyo download music online, waxaad laga yaabaa badan oo files audio ee .RA, R ama kordhin file .RAM. Hadda ayaad isticmaalaysaa Google Music in uu kaydiyo ururinta oo dhan, iyo dhibaatada ka dhacdaa: Google Music cad ayaa sheegtay in ayan taageerin RA qaab maqal ah.
Ilaa hadda sida aad ogtahay, Google Music si buuxda u taageersan qaab MP3. Sidaas oo ay diinta RA in MP3 , oo dhan RA music aad si ammaan gelin doonaa in Google Music. Laakiin taas software badasha RA in MP3 leh tayo sare leh. Halkan ayaan u Khushuucdo Dartiis talinaynaa Wondershare Video Converter , kaas oo sameeya shaqo fiican ee RA in MP3 diinta, xafidaada tayada asalka audio. Download tijaabo ah oo bilaash ah halkan.
Si fudud Beddelaan RA in MP3 in ay geliyaan si ay Google Music
Download iyo rakibi Video Converter . Markaas, kaliya 3 talaabooyinka loo baahanyahay si loogu badalo RA in Google Music MP3.
Tallaabo 1: Ku dar RA in MP3 Converter
Waxaad si toos ah jiidi karo oo hoos u files RA ka folder barnaamijka, ama guji "Add Files" 'badhanka si ay u dajiyaan files RA. Ogeysiis in RA files audio ayaa laga yaabaa in loo kordhin file kuwan: .Wuxuu, .ra, .ram, .rm, iwm sokow qaab RA ah, qaabab loo jecel yahay sida regelingen, daanyeer, AC3, M4A, M4P, M4A, M4B, iyo WMA ayaa sidoo kale taageeray.
Talaabada 2: RA in MP3 Settings
Waxaa haboon inuu ku dhigay 320kpbs MP3 format sida wax soo saarka u Music Google. Sidaa awgeed, furo "Qaabka Output" liiska qaab, oo guji thumbnail MP3 hoostiisa ku "qaab"> "Audio" subcategory. Markaas riix doorasho "Settings" ku "Qaabka Output" Murayaad si ay u doortaan 320 kbps liiska Rate Inyar . The sare bitrate yahay, weyn MP3 files la abuuri doono, laakiin waxaad ka heli tayada fiican audio.
Tallaabo 3: Ka billow diinta RA in MP3 u Google Music
Hadda Waa ammaan in la weeraray "Beddelaan" badhanka si loogu badalo oo dhan files RA safka in MP3 files ku dhowaad aan khasaaro tayada wax. Waqtiga RA in MP3 diinta ku xiran tahay tirada files RA, laakiin Video Converter badasha files audio ee xawaaraha si dhakhso ah. Just dib fadhiisan oo sug. Ugu dambeyntii, isticmaalaan Manager rasmi Google Music inay geliyaan tayo sare leh MP3 files si Google Music .
Waa maxay Qaabka RA Audio?
Faataxada (RA) waa qaab lahaansho audio sii daayay bishii April 1995 shirkadda RealNetwords. In ka sano ee soo socota hufan, xarumo badan oo radio online isticmaalaan qaab faataxada inay sii qulquli music in waqtiga dhabta ah. Tusaale ahaan, website BBC si xoogan loo isticmaalo faataxada baahinta barnaamijyada ay online. Si kastaba ha ahaatee, sida faataxada siiyey si ay qaabab badan oo caan audio sannadahan, sida M4A iyo WMA. Si aad u ciyaaraan files faataxada, waxaad isticmaali kartaa barnaamijka default ay: RealPlayer.
Isku day ama iibsadaan RA in Google Music MP3 Converter:
Sidee si ay u gudbiyaan Xiriirada iyo SMS ka BlackBerry in Android